Daawo Video: Kuuriyada Waqooyi oo ku Hanjabtay inay dhulka La simi doonaan Saldhiga Maraykanka iyo Xiisad cusub - Hablaha Media Network
Daawo Video: Kuuriyada Waqooyi oo ku Hanjabtay inay dhulka La simi doonaan Saldhiga Maraykanka iyo Xiisad cusub
HMN:- Dowlada Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay dajineyso daraasadna ku wado inay duqeyso jasiirada Maraykanka ku leeyahay badda Pacific ee Guam.
Jasiirada Guam ayaa ah dhulka ugu dhaw ee Maraykanka ka taliyo oo u dhaw dalalka Kuuriyada, waxaana halkaasi saldhig aad u weyn ku leh ciidamada cirka ee Maraykanka.
Isniintii lasoo dhaafay ayey markale diyaarado wax duqeeya ee uu Maraykanka leeyahay kasoo duuleen jasiirada Guam kuwaasi oo dhoolatus ku sameeyey nawaaxiga Kuuriyada Waqooyi.
HALKAN KA DAAWO MUUQAALKA IYO XIISADA
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa shalay mar uu saxaafada la hadlayey sheegay in Kuuriyada Waqooyi maalmihii lasoo dhaafay ay waday hanjabaad ku aadan Maraykanka, balse Maraykanka uu “Dagaal iyo Burburin” aan adduunka horey usoo marin uga jawaabi doono hanjabaada K/waqooyi hadii aysan joojin waxa ay wadaan.
Arrintan ayey iyaguna kuuriyada Waqooyi uga jawaabeen inay bada la simi doonaan jasiirada Guam oo ay sheegeen inay si fudud u gaaraan gantaaladooda ridada dhexe.